Service Designing Website
MID-MAN – AGENCY WEBSITE DESIGN COMMIT UX/UI STANDARD REQUIREMENTS
Mamorona tranokala kalitao ao amin'ny Mid-Man Agency. Ny famoronana sy fampivelarana tranonkala mitondra lanja sy mandaitra no tanjona tian'ny ekipa Mid-Man ho anao. Ny Mid-Man dia hanampy anao hamaha ny olan'ny fanatratrarana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny serivisy, ny famolavolana tranokala, CREATIVE - OPTIMIZATION - SEO STANDARD - PROFESSIONAL sy EFFECTIVE.
MIditra amin'ny fironana ve ianao sa manolo-tena ho very?
Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny teknolojia nomerika 4.0, miaraka amin'ny fivoaran'ny Internet haingana, ny fironana amin'ny raharaham-barotra an-tserasera na fivarotana an-tserasera dia nitondra fahombiazana ara-toekarena ho an'ny orinasa maro manerana izao tontolo izao. Ahoana ny hevitrao? Manamboatra tranokala ve ianao ary mandray anjara amin'ny tsenan'ny fandraharahana amin'ny Internet?
Araka ny tatitry ny Google, Temasek, ary Brain & Company tamin'ny taona 2019, ny tahan'ny fitomboana amin'ny vanim-potoana 2015-2025 amin'ny e-varotra dia 29%. Miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana haingana toy izany, misokatra malalaka ny fahafahanao mandray anjara amin'ny tsenan'ny fandraharahana an-tserasera.
Araka ny filazan'ny Fikambanana E-varotra (VECOM), tamin'ny taona 2019, manodidina ny 42% ny orinasa no manana tranokala, ka hatramin'ny 37% no nahazo baiko tamin'ny alàlan'ny tranokala. Tsy mpanjifa antsinjarany ihany, mpanjifa izay orinasa manafatra amin'ny alàlan'ny kaonty tranonkala amin'ny tahan'ny hatramin'ny 44%. Izany dia mampiseho fa ny mpampiasa dia mitodika tsikelikely amin'ny fividianana entana amin'ny tranokala fa tsy mividy vokatra mahazatra.
Mifototra amin'ny fiovan'ny fitondran-tena amin'ny fividianana mandritra ny vanim-potoana COVID, manana tombony amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny Internet ny orinasa manana tranokala. Mety ho sahiran-tsaina ianao amin'ny fifaninanana amin'ireo mpialoha lalana, saingy azo antoka ihany koa izany. Satria mifototra amin'ny zavatra nataon'ireo mpifaninana aminao, ity dia fotoana iray hianaranao, hiainanao, hanavaozana ary hamoronana ny tranokalanao.
Araka ny angon-drakitra, hatramin'ny 2019, hatramin'ny 55% amin'ny orinasa dia manana vokatra maharitra, ary 26% no mihevitra ny tranokala ho fitaovana mahasoa indrindra amin'ny fivarotana vokatra. Noho izany, ny zavatra voalohany sy ilaina amin'izao fotoana izao dia ny famolavolana tranokala ho anao manokana. Ny Mid-Man dia hiaraka aminao, hamorona endrika tranokala matihanina, ary hanampy ny asa aman-draharahanao hampiroborobo sy hivoatra.
MID-MAN dia mirehareha amin'ny maha-mpanorina tranokala matihanina manana traikefa an-taonany maro amin'ny sehatry ny varotra amin'ny tsenan'ny Marketing. Hiara-dia sy hanohana anao amin'ny fandrafetana tranokala fivarotana EFFECTIVE, QUALITY, PRESTIGE, ARY PROFESSIONAL izahay. Ny FAHAFAHAFANAO dia ADIDY amin'ny EKIM-pamolavolana tranonkala manontolo ao amin'ny MID-MAN.
Ny tsena dia ny ady. Ny tranokala dia ny fototra, ny arsenal ary ny toerana ho fampahalalana anao. Raha mbola tsy manana fototra vohikala manara-penitra ianao dia manomboka manangana azy anio. Amin'izao vanim-potoanan'ny fanovana nomerika mivaingana izao, tsy ampy ny fananana tranokala. Ny fananana tranokala ary, miasa amin'ny fomba mahomby, manampy amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola no tanjona tokony ho tanjonao. Ankoatra ny famolavolana tranonkala manintona, mila mandinika ny traikefan'ny mpampiasa ianao. Satria ny famolavolana tranonkala miaraka amin'ny dingana fividianana sy fahalalana tsotra sy mora dia ilaina ho anao mba "hanakatona ny baiko" amin'ny mpanjifa mora kokoa, MID-MAN AGENCY miaraka amin'ny tontolo iainana misy vahaolana ara-barotra tanteraka no ho tetezana hanampy anao hanakaiky kokoa ny mpanjifa kendrenao. amin'ny tsenan'ny Internet.
Miaraka amin'ny tanjaky ny famolavolana tranonkala, ny interface mahazatra ary ny traikefan'ny mpampiasa, MID-MAN dia mirehareha amin'ny maha-tompon'andraikitra ny QUALITY AND PRESTIGE.
NAHOANA IANAO NO TOKONY HAMORONANA WEBSITE?
Ny tranokala dia fantsom-pifandraisana ary fitaovana ara-barotra malaza ankehitriny. Ny tranokala dia toy ny endrika maneho anao, ny orinasanao, na ny fikambananao amin'ny sehatra teknolojia nomerika 4.0 IOT.
Ny tena zava-dehibe, nandritra ny vanim-potoana faratampony tamin'ny valan'aretina Covid-19, dia voa mafy ny toekaren'izao tontolo izao. Betsaka ny indostria voakasika mivantana, toy ny fanafarana-fanondranana, fizahantany, sns, fa ny vola miditra amin’ny fiantsenana an-tserasera amin’ny alalan’ny tranonkala. Ny tranokalan'ny orinasa maro sy ny pejin'ny e-varotra B2C dia mbola nitombo 20-30%, na dia nitombo be aza ny entana ilaina sy ny fitaovana fitsaboana. Izany dia mampiseho fa ny fiovan'ny fiantsenan'ny mpampiasa dia mizotra tsikelikely mankany amin'ny tsena an-tserasera.
Miaraka amin'ny fiovan'ny nomerika sy ny anjara asa manan-danja amin'ny tranokala amin'izao fotoana izao, tsy misy antony tokony hisalasalanao hamolavola tranokala sy hampiroborobo ny marikao amin'ny tsenan'ny Internet.
SEO manara-penitra famolavolana tranokala
SEO manara-penitra momba ny famolavolana tranonkala matihanina dia manamora ny fanatsarana sy ny fametrahana ny vokatra sy ny serivisinao ao amin'ny fikarohana TOP ao amin'ny Google. Ao amin'ny MID-MAN, ny tranokala dia natao miaraka amin'ny fenitry SEO hatramin'ny fotoana nanorenana tranonkala, namboarina avy amin'ny kaody loharano mankany amin'ny endri-javatra, OnPage sy OffPage, famolavolana mamaly, azo antoka miaraka amin'ny protocol SSL sariaka amin'ny milina fikarohana. ..
FOUNDATION DESIGN WEBSITE ETO AMIN'NY AGENCY MID-MAN
Tsy sahala amin'ireo singa famolavolana tranokala hafa eny an-tsena ankehitriny, ny MID-MAN dia tsy voafetra amin'ny fiteny na sehatra famolavolana manokana. Ny ekipa injeniera MID-MAN manana fahaiza-manao cross-platform hamolavola WordPress, Laravel, React, React Native, Node JS… dia hanatanteraka ny fepetra rehetra momba ny famolavolana tranokalanao.
NAHOANA NO NISAFIDY NY DESIGN WEBSITE MID-MAN?
DESIGN WEBSITE MULTI-INFORMATION
DESIGN WEBSITE INTERIOR
Ny fanaka dia heverina ho indostrian'ny zavakanto ampiharina. Noho izany, ny tranokala famolavolana anatiny dia mila mahafeno ny aesthetic, manintona ary mampiseho ny fomba marika amin'ny orinasanao. Ny fananana vohikala anatiny dia manampy ny orinasanao hanandratra ny marikao ary hanatratra ny antontan-taratasin'ireo mpanjifa mety ho ao amin'ny tsenan'ny Internet.
AVY AMIN'NY HEVITRA HANAMPY NY FAMPANDROSOANA
DINGANA FANORONANA WEBSITE PROFESSIONAL AO MID-MAN
MID-MAN, miaraka amin'ny teny filamatra momba ny asa mifantoka amin'ny mpanjifa, dia mikendry hatrany ny vahaolana fanohanana mpanjifa amin'ny hetsika famolavolana tranonkala. Manana fomba fiasa mahitsy izahay mba hanompoana anao amin'ny fomba matihanina indrindra.
Fahatakarana ny mpanjifa
Ny mpiasan'ny MID-MAN efa za-draharaha dia mihaona amin'ny mpanjifa, mihaino hevitra momba ny famolavolana, ary mifanakalo hevitra momba ny endri-javatra tianao amin'ny famolavolana tranonkala. Rehefa avy nifampidinika ny vahaolana sy ny endri-javatra mifanaraka amin'ny tanjonao sy ny filanao, dia manomana ny famolavolana izahay.
Fanasoniavana sy fiaraha-miasa
Mba hiantohana ny zonao dia miara-manao taratasy ara-dalàna izahay. Ny fifanomezan-tanana kely dia mampiseho fanahy lehibe. MID-MAN no ho mpiara-miasa aminao, hanampy anao amin'ny fananganana ny vahaolana tsara amin'ny famolavolana tranokala sy hanandratra ny marikao eny an-tsena.
Miorina amin'ny hevitrao, ny ekipa mpamorona tranokala MID-MAN manana saina mamorona sy mandray andraikitra dia hamorona endrika tranokala demo tsara tarehy, manintona ary manara-penitra UI/UX. Aorian'ny famerenanao ny demo dia hanao fanitsiana ho anao ny ekipan'ny famolavolana mba hamaranana ny famolavolana amin'ny antsipiriany.
Avy amin'ny famolavolana ananantsika sy ny traikefa voaangona tao anatin'ny taona maro niasana, ny ekipan'ny mpandrindra dia handrafitra ny UX standard programming (mpampiasa traikefa) ary hampihatra ny fandaharana amin'ny Internet mba hiantohana ireo endri-javatra feno izay sarobidy sy mety amin'ny tranokalanao.
Andrana sy ovaina
Amin'ity dingana ity, saika vita ny famolavolana tranokalanao. Na izany aza, mba hamoronana vokatra tsara indrindra sy hahazoana antoka fa miasa tsara sy mahomby ny tranokala, ny ekipa teknika MID-MAN dia hanamarina sy hanao calibrate alohan'ny hampiasana azy.
Ny fandraisana feno dia andraikitry ny ekipa MID-MAN manontolo. Ny ekipa MID-MAN dia hitari-dalana anao miaraka amin'ireo mpandrindra tranonkala manokan-tena sy misaina. Na dia efa vita aza ny tetikasa dia vonona hatrany ny ekipa MID-MAN hanohana anao amin'ny fampandehanana sy fitantanana ny tranokala.
NAHOANA IANAO NO TOKONY HIFIDY SERVICES DESIGN WEBSITE ATAO AMIN'NY MID-MAN?
MID-MAN AGENCY dia manana ekipan'ny mpiasa za-draharaha amin'ny famolavolana tranonkala indostrialy maro. Miaraka amin'ny fiteny famolavolana isan-karazany, mahafeno ny fepetra rehetra ilainao izahay. Mifandraisa aminay mba hahazoana famolavolana tranokala matihanina sy mahomby.
Famolavolana tranokala fototra
Tranonkala hampahafantarana olona, ​​fivarotana ary orinasa salantsalany sy madinika
Tranonkala fivarotana ankapobeny
Famolavolana interface tsara amin'ny fangatahana: interface tsara 1 homepage
Fanovana hoditra maimaim-poana: hatramin'ny in-3
Fandaharana asa fototra amin'ny fangatahana
Vokatry ny tranokala: fototra
Sehatra fandaharana: azo atao
Famolavolana UI / UX mahazatra - User Interface sy User Experience
Standard Responsive - mifanaraka amin'ny navigateur sy fitaovana maro toy ny PC, solosaina, takelaka ary finday.
Fanamafisana ny hafainganam-pandehan'ny pejy
Fandaharana SEO mahazatra
Fiarovana SSL maimaim-poana mandritra ny taona voalohany
Torolàlana momba ny fitantanan-draharaha
Fanomezana ny kaody loharano (code source)
Warranty sy fikojakojana mandritra ny androm-piainany
Fanohanana ara-teknika 24 / 7
Famolavolana tranonkala avo lenta
Tranonkala hampidirana fivarotana, orinasa lehibe
Tranonkala ho an'ny orinasa an-tserasera, vaovao, serivisy, fitantanam-bola, teknolojia tokana, sary avo lenta…
Famolavolana interface tsara amin'ny fangatahana: hoditra tsy misy fetra
Fanamboarana hoditra maimaim-poana: hatramin'ny in-5
Fandaharana fiasa mandroso amin'ny fangatahana
Vokatry ny tranokala: Advanced
Fampifandraisana fantsona maro miaraka amin'ny antoko fahatelo
Free Comprehensive Marketing Solution Consulting
Fihenam-bidy amin'ny saram-pandraharahana momba ny varotra
Standard Responsive - mifanaraka amin'ny navigateur sy fitaovana maro toy ny PC, solosaina, takelaka, finday, mihetsika,…
MANINONA NO MIKO TECH ny DESIGN WEBSITE ?
Ny famolavolana tranokala namboarina araka ny fepetra fototra mifantoka amin'ny mpanjifanao no tanjona kendren'ny MID-MAN. Takatsika fa amin'ny indostrian'ny habe rehetra dia ilaina ny famolavolana tranokala matihanina sy mahomby. Noho izany, ny serivisy famolavolana tranonkala dia manome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra amin'ny vidiny mirary.
FAMALIANA NY FANONTANIANA REHEFA MANDARITRA NY SITIKY AO MID-MAN
ANONTANY IANAO - VALINY ANTSONY
Mila mianatra bebe kokoa momba ny serivisy famolavolana tranokala an'ny MID-MAN? Jereo eto ambany ny valiny!
Inona no azonao amin'ny Design Website?
Ny famolavolan-tranonkala na ny famolavolana tranokala dia asa famoronana tranonkala ho an'ny olona iray, orinasa, orinasa, na fikambanana. Misy fomba roa lehibe amin'ny famolavolana tranonkala: famolavolana tranonkala static sy famolavolana tranonkala mavitrika. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny lahatsoratra Inona no atao hoe famolavolana tranonkala?
Inona no atao hoe SEO standard design web?
Ny famolavolan-tranonkala SEO manara-penitra dia vohikala misy fanamafisam-peo sy endri-javatra ahafahan'ny milina fikarohana toy ny Google, Yahoo, ary Bing… handady sy hahatakatra mora foana ny tranokala manontolo. Jereo ny lahatsoratra amin'ny antsipiriany momba ny teny mihoatra ny 3000 momba ny famolavolana tranokala mahazatra SEO
Inona no atao hoe famolavolana tranonkala responsive?
Ny famolavolana tranonkala mandray andraikitra dia fomba tsotra ahafahana manangana sy manangana tranokala mifanentana ary mampiseho azy ireo amin'ny karazana fitaovana elektronika rehetra, toy ny finday, tablette, solosaina finday, PC, sns... miaraka amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, na rafitra tranonkala rehetra.
Ohatrinona ny fandrafetana ity tranokala ity?
Miankina amin'ny fepetra takiana sy ny endri-javatra amin'ny tranokala tsirairay, ny vondrona famolavolana dia manolotra vidin'ny famolavolana tranokala samihafa.
Mandra-pahoviana vao vita ny famolavolana tranonkala?
Ny fotoana hamitana tranokala dia hiankina amin'ny lafin-javatra maro toy ny faritra tian'ny tranokala, mpanjifa; fifanakalozam-bola amin'ny mpiara-miombon'antoka, interface tsotra na sarotra; fampiasa amin'ny tranokala, ary endri-javatra hafa. Ny fotoana hamolavolana tranokala ao amin'ny MID-MAN dia matetika 3-4 herinandro, araka ny fifanakalozana amin'ny mpiara-miasa.
Manana fifanarahana mazava ve ny mpamorona tranonkala?
MID-MAN dia manolo-tena hanana fifanarahana iray manontolo hiarovana ny tombontsoan'ny mpiara-miombon'antoka, hiantohana ny fahamarinan-toetra, ny mangarahara ary ny fahamendrehana rehefa miara-miasa.
Miaraka amin'ny traikefa rehetra, ny fanoloran-tena ary ny maha-matihanina, ny Mid-Man dia manome antoka ny orinasa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny famolavolana tranokala matihanina.
Ny Cấp: 05/03/2021 ho an'ny Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội
Tranonkala Trang: https://mid-man.com/
© 2021 Mid-Man - Vahaolana amin'ny famolavolana tranokala azo itokisana ho an'ny orinasa an-tserasera
Lisitry ny resaka
Misafidiana chat iray hanombohana hafatra.